Blaogim-Piarahamonina GV · Janoary, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny Blaogim-Piarahamonina GV tamin'ny Janoary, 2018
Hafanam-po29 Janoary 2018
Manomboka Ny Taona 2018 Miaraka Amina Fifandraisana Mahatsikaiky Ireo Afrikana Mpibitsika
Mediam-bahoaka22 Janoary 2018
Mety ho volana matroka ny volana Janoary fa taorian'ireo fety maroloko, mihisatra eo amin'ny asany ny olona. Maro ny olona manerana an'i Afrika no mitaraina noho ireo teritery ara-bola ary misy fiantraikany ratsy ara-panahy io. Na izany aza, niantomboka tamin'ny naoty maivana iray ny taona 2018 manerana an'i Afrika satria...
Vaovao Farany Lingua : Novambra 2017
Mediam-bahoaka17 Janoary 2018
Atolotry ny Mpitantana ny Lingua ho anareo ny toerana nisy ny Lingua tamin'ny Novambra 2017
Vaovao Farany Lingua : Desambra 2017
Atolotry ny Mpitantana ny Lingua ho anareo ny toerana nisy ny Lingua tamin'ny Desambra 2017
Tongasoa Ny Toniandahatsoratra Vaovao Ho An'ny Lingua Arabo!
Filazàna momba an'i Ali Khalil, toniandahatsoratry ny Lingua Arabo!
Mety hatao tantara iray amin'ny GV ve ny lahatsoratra Instagram toy ity?
Tratry Ny Taona Ny GV! Manomboka Ny Fiandohana Vaovao Indray Isika Eto! Andao Hanatanteraka Izany Isika!
Mediam-bahoaka11 Janoary 2018
Indro ny fanombohana vaovao ry GV!
Niova Ny Mpitantana Ny Lingua Esperanto!
Mediam-bahoaka06 Janoary 2018
Fanambarana fiovana amin'ny Lingua Esperanto, nitsahatra i Vastalto ary i Steve Brewer no Toninadahatsoratra Lingua Esperanto vaovao!
Ny Firenena Notsidihako Fahatelo Amin'ny Maha Vondrom-piarahamonin'ny Global Voices Ahy
Tamin'ity volana ity, efa ho fito taona taorian'ny nialako tany Maraoka nankany Etazonia, nifindra toeran-kafa indray aho, tany Berlin, Alemaina tamin'ity indray mitoraka ity. Mbola nipetraka tany amin'ny toerana iray vaovao tanteraka indray aho, ary nahita ny tontolo avy amin'ny fomba fijery vaovao tanteraka.